गर्भावस्थामा कस्मेटिक कति सुरक्षित? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
गर्भावस्थामा कस्मेटिक कति सुरक्षित?
स्वास्थ्यखबर शनिबार, फागुन १, २०७७, ०८:१५:००
गर्भवती धेरै कुरामा होसियार हुन्छन्। गर्भवती हुँदा मदिरा पिउन र धूमपान नगर्न दिइएका निर्देशन सामान्य भए पनि कस्मेटिम वा सफा गर्ने उत्पादक सामग्रीका बारेमा भने बिरलै उल्लेख गरिएको हुन्छ। कस्मेटिक पदार्थमा पाइने पिथालेट्स, पाराबेन र लिडले गर्भवतीमा अरु समस्या थपिदिन्छ। निम्न रसायनका बारेमा गर्भवती सावधान हुनुपर्छ।
लिपिस्टिक, आइस्याडोलगायतका अन्य कस्मेटिक सामग्रीमा प्रयोग हुने साझा तत्व हो, लिड। कस्मेटिक सामग्रीमा २० पिपिएम लिड राख्न अनुमति दिइए पनि विभिन्न ब्रान्डले अत्यधिक मात्रामा यो धातुको प्रयोग गरी स्वास्थ्यलाई नै गम्भीर हानि पुर्‍याएका हुन्छन्। लिड गर्भनाल र दूध ग्रन्थिमार्फत् प्रवाह हुने र भ्रुण विकासलाई असर गर्ने भएकाले गर्भवती र दूध चुसाउने महिलाका लागि लिड हानिकारक हुन्छ।
यो औषधि छालाको रोग नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। क्रिमलगायत मेकअपका सामग्री उत्पादन गर्न पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। अर्काइभ अफ डर्मोेटोलोजीमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार गर्भावस्थामा इसोट्रेटिनोनिनको एक्सपोजले भ्रुणमा गम्भीर असर भई बालबालिका जन्मिँदै सुस्त मनस्थितिका हुन्छन् र भ्रुणको राम्रो विकास समेत हुँदैन। तसर्थ, यस्ता सामग्री प्रयोग गर्नुअगाडि चिकित्सकहरुको परामर्श लिनुहोस्।
साबुन, स्याम्पुलगायतका केयर प्रोडक्टमा पाइने पिथालेट्सको दीर्घकालीन प्रयोगले पाँचदेखि १३ साताभित्र गर्भ खेर जाने सम्भावना हुन्छ। कारखानामा विभिन्न रसायनसँग एक्सपोज हुने महिला प्रिगनेन्सी कम्प्लिकेसनबाट पीडित छन्।
ट्रिक्लोसान र ट्रिक्लोकार्बन
साबुन, टुथपेस्ट र हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने सामग्रीमा यस्तो रसायन हुन्छ। ट्रिक्लोसान र ट्रिक्लोकार्बनले गर्भवतीको स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउनुका साथै नवजात शिशुको आकारमा पनि असर गर्छ।
कपाल रंग्याउने उत्पादनमा एमोनिया, फेनिडायममाइन्स र रिर्सोसिनोल रसायन हुन्छ। यसले छालामा एलर्जी ल्याउँछ। यी रसायनहरुबाट क्यान्सर हुने सम्भावना समेत हुन्छ। तसर्थ गर्भवतीले स्वाभाविक कलरको प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि उनीहरुको शिर र कपाललाई कुनै असर नगरोस्। यस्ता रसायनको प्रयोगले प्रिम्याचुअर वर्थ, न्यून तौल भएका शिशुको जन्म र भ्रुणमा असर परी शिशु नै सुस्त मनस्थितिको हुन्छ। एजेन्सी